Ikamva le-Utopian lokuThengisa iTshaneli | Martech Zone
Amaqabane amajelo kunye nabathengisi abathengisa amaxabiso (VARs) ngabantwana bomtshato wesibini ababomvu (baphathwa ngaphandle kwelungelo lobuzibulo) xa kufikwa ekufumaneni ingqalelo kunye nezixhobo ezivela kubavelisi beemveliso ezingenakubalwa abazithengisayo. Bangabokugqibela ukufumana uqeqesho kwaye abokuqala ukubekwa uxanduva lokuhlangabezana nezabelo zabo. Ngohlahlo-lwabiwo mali olunqongopheleyo, kunye nezixhobo zentengiso eziphelelwe lixesha, bayasokola ukunxibelelana ngokufanelekileyo ukuba kutheni iimveliso zahlukile kwaye zahlukile.
Yintoni ukuThengisa kweShaneli? Indlela yokuhambisa esetyenziswa lishishini ukuthengisa iimveliso zalo, zihlala zokwahlula amandla alo okuthengisa ngokwamaqela ajolise kwiindlela ezahlukeneyo zokuthengisa. Umzekelo, inkampani inokusebenzisa isicwangciso-qhinga sokuthengisa ishaneli ukuze ithengise imveliso yayo ngokuthengisa ngaphakathi endlwini, abathengisi, abathengisi okanye ngentengiso ethe ngqo. Isichazi-magama seshishini.
Kule minyaka idlulileyo sikubonile ukukhula okuqhubayo kwicandelo lobugcisa lokuthengisa, kubangela ukuba inkampani yophando Gartner ukuxela kwangaphambili oko Ii-CMO ziya kuba zisebenzisa ii-CIOs kwi-IT ngonyaka we-2017. Oku kundikhokelela ekubeni ndizibuze ukuba, okanye, ukuba, ii-OEMs ziya kulungelelanisa njani na isicwangciso-nkqubo sentengiso, kwaye okona kubaluleke kakhulu, ngaba kuya kubakho ukugxila kokutsha kwizixhobo zokuthengisa ezinokuthi zichaphazele ukukhula kunye nempumelelo yentengiso yeshaneli?
Ngobuchwephesha obutsha obutshintsha ngokukhawuleza imeko yokuthengisa kunye nokuthengisa ndicinga ukuba ikamva lokuthengisa amajelo liya kunciphisa eminye yemiceli mngeni kumaqabane amajelo kunye neeVARs abajamelene nazo ngoku:
uqeqesho - Uphononongo lwakutsha nje olwenziwe ngu Qvidian ibonisa ukuba Kuthatha umndilili weenyanga ezili-9 ukuqeqesha ngempumelelo ummeli weNtengiso, kwaye ngamanye amaxesha kungathatha unyaka omnye ukuze zisebenze ngokupheleleyo. Ngelixa ummeli ophakathi enoxanduva lokuthengisa imveliso ethile, okanye imveliso, ii-VAR zinikwe umsebenzi wokuthengisa iimveliso ezininzi ezivela kwiinkampani ezahlukeneyo. Ukuba le nkcukacha-manani iyinyani kubameli abathengisayo, umntu unokucinga ukuba iqabane lesitishi linike umsebenzi wokufunda ngeentambo zemveliso ebanzi evela kumenzi omnye kunokuthatha ixesha elide ukuqeqesha.
Ukungabikho kwezixhobo zokuThengisa I-40% yazo zonke izinto zentengiso azisetyenziswanga ngamaqela okuthengisa, iyavakala xa ucinga ukuba ezi zinto zihlala ziziincwadana ezinemifanekiso kunye nesibambiso, iividiyo ezitshixwayo, okanye imiboniso emiselweyo yePowerPoint engancediyo ukwenza inkqubo yokuThengisa. Njengoko abathengi bangoku bafuna ulawulo oluthe kratya nangakumbi, amaqabane esiteshini kufuneka akwazi ukubonelela ngamava okuThengisa kunye nokuzibandakanya, kuyo nayiphi na imveliso kunye nezisombululo abazithengisayo. Xa kuthengiswa iimveliso ezivela kwiinkampani ezahlukeneyo ezikhuphisana ngqo, kusenokwenzeka ukuba amaqabane amajelo aza kuchitha ixesha lawo bezama ukuthengisa iimveliso abazifumana zilula ukwahlula-kwaye ke ngoko kufutshane kwizivumelwano. Abavelisi bemveliso bayifumene le nto, kwaye sele bejikela kwiimodeli zeMveliso eziBonakalayo ze-3D, ezijongeka kwaye ziziphatha njengeyona mveliso, ukufumana iminikelo yabo ezandleni zamaqela okuThengisa kunye namaqabane esitishi. Nangona kunjalo, amaqabane amajelo ahlala engowokugqibela ukufumana ezi zixhobo zisebenzisanayo zokuthengisa ngenxa yemirhumo ephezulu yesoftware, ukuba bafumana izixhobo ezisebenzisanayo konke konke, bezishiya zikwimeko emaxongo.
Ihlabathi -I-VARs kunye namaqabane esitishi ahlala ekumhlaba jikelele, ngokunokwenzeka kude kakhulu kwindawo yomvelisi ekufuphi okanye kumaziko okubonisa imveliso. Ke ngoko, bafuna izixhobo eziza kubavumela ukuba bathengise ngcono nakweyiphi na indawo, nangaliphi na ixesha. Ngelixa usetyenziso lweselfowuni luqala ukunciphisa le ngxaki, iitafile / ii-smartphones ezininzi zithwala ubunzima bokuthandwa kumazwe ahlukeneyo, okwenza ukuhanjiswa komxholo kube nzima ngakumbi, njengesixhobo sokwenza intengiso kufuneka sikwazi ukusebenza kuso nasiphi na isixhobo iqabane lesitayile elinaso. Izithintelo kulwimi zinika izixhobo ezininzi zokuthengisa zingasebenzi, ngaphandle kokuba zinokuguqulelwa kulwimi lwasekhaya ukuba zisetyenziswe kumazwe angaphandle.
UkuFikelela kweNdalo iphela Njengoko bekutshiwo ngaphambili, abameli abasasazeke kwihlabathi liphela basebenzisa izixhobo ezininzi ezahlukeneyo, ukusuka kwiilaptops ukuya kwizixhobo eziphathwayo, kwaye bafuna isixhobo esisebenza ngaphandle komthungo-ukubonelela ngamava kwindalo iphela ngaphandle kwendawo. Ngoku ka i-Qvidian, esona sizathu sokuThengisa ukungahoyi izinto zokuthengisa kungenxa yokuba abakwazi ukuzifumana okanye ukufikelela kuzo. Oku kuthetha ukuba ulwazi olufanelekileyo lusasazwe ezandleni zamaqabane esitishi kunye neeVAR kwizixhobo ezifanelekileyo kubaluleke kakhulu ukunxibelelana nomyalezo wakho ngaphandle komthungo nangokungaguquguqukiyo. Ukusetyenziswa kwimimandla apho ukufikelela kwi-Intanethi ngokungaguquguquki kunzima ukufikelela khona, okanye ukusetyenziswa kwiindawo ezinjengekomkhulu lendibaniselwano okanye izibhedlele apho ukufikelela kwi-Intanethi kuhlala kuthintelwa, amaqabane amajelo adinga usetyenziso olusebenza kwi-Intanethi nakwi-Offline, kwii-laptops, kwii-smartphones nakwiipilisi. Rhoqo, ezi ntlobo zezicelo zifuna iilayisensi (ngokusekwe kwinani labasebenzisi), eshiya amaqabane amajelo kunye neeVARs engxakini enkulu, njengoko ii-OEMs ezininzi zithandabuza ukuthatha ithebhu yezixhobo ezenza ukuba amaqabane anakho okanye angazisebenzisi .
Khawufane ucinge ngekamva le-Utopian lokuThengisa iShaneli
Izixhobo ezenza ukuba ukuthengisa zenziwe ngokukodwa kwimijelo ayiniki kuphela ukufikelela kwi-100% kwiimveliso ezisebenzisanayo, (ngokubonisa phantse) kodwa ikwabonisa indlela iimveliso ezahlukeneyo ezinokuthi zisebenze kunye ukusombulula ngcono imiceli mngeni yeshishini labathengi, nokuba yeyiphi na inkampani eyenzayo. Oku kungaguqula onke amaqabane abe yingcali yemveliso, njengoko beya kuba nemiboniso efanelekileyo yemveliso, izinto ezixhasayo, kunye nemiyalezo yokuthengisa abanokuyisebenzisa okomzuzwana. Ekugqibeleni, amaqabane amajelo aya kuba nakho ukudibanisa yonke le miboniso ye-3D ebonakalayo, ngaphandle kwe-OEM, kwizixhobo ezisebenzisanayo zokuthengisa kunye nophawu lwabo, ebavumela ukuba babonise okona kulungileyo isisombululo kubathengi ngokudibanisa izibonelelo ezahlukeneyo ezivela kumaqabane abo.
Ayisiyiyo kuphela isixhobo esifanelekileyo esinokufikelela kuyo yonke imigca yemveliso, kodwa abasebenzisi abangenamkhawulo baya kuba nokufikelela kwi-24/7, kwi-intanethi okanye ngaphandle kweintanethi, naphi na emhlabeni-ukubonelela ngamava kwindalo iphela ngaphandle kwendawo okanye iqonga. Isicatshulwa esinokuguqulelwa ngokulula sinokwenza ukudala iinguqulelo zesicelo ngokukhawuleza, kwaye ukungqinelana kwesixhobo esinqamlezileyo kuya kuguqula naziphi na izixhobo zamaqabane zibe kukukhawulezisa intengiso.
Ngelixa oku kunokuba ngathi liphupha, ndiyakholelwa ukuba ikamva lezixhobo ezisebenzisanayo, ezinqamlezileyo ezinje ngezi kumaqabane esitishi kunye neeVARs zisenokungabikho kude kakhulu!
tags: amaqabane esitishiukuthengisa umjelouqeqesho lokuthengisa amajeloNxaxhebaumlingisiihlabathiUkusebenzisana kwe-kaonOemqvidiabathengisiUkunika amandla ukuthengisaukufikelela jikeleleIxabiso elongeziweyo labathengisivarvars
Iindlela ezi-4 eziphambili zokuThathwa kwiSicwangciso esiliQili sokuThengisa